Rochak – aajnepal
वैंज्ञानिकले पत्ता लगाए यौन सम्पर्क गर्ने उत्तम समय ! यस्तो छ यौन सम्पर्क गर्ने शुभ समय ?
काठमाडौं । यौन सम्पर्क कुन समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यो सामान्य प्रश्न हो यसको उत्तर पनि मानिसहरुले अत्ति सरल रुपमा दिन्छन । जब चाहाना हुन्छ तब दुबैजनाको सहमतिमा सम्बन्ध राख्नुपर्दछ । यो कुरा पनि […]
यो तस्वीर जसले संसारलाई भावुक बनायो ! [मानिस मिलेर कुकुर मारे गाईले छाउरालाई दुध पिलाउँछ]
काठमाडौं । आज संसारमा मानवता हराईरहेको देखिन्छ । हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता कुराहरुबाट मानव बाहिर आउँन सकेको छैंन । कहिलेकाँही तपाईले सुन्नु भएको होला मान्छे भन्दा त पशु दयालु हुन्छन । यो कुरा यर्थातमा पनि […]
दुई यौनाङ्ग भएकी महिलाका दुःखः दुई वटा पाइन्ट लगाउनुपर्थ्यो
निक्की दुई यौनाङ्ग लिएर जन्मेकी थिइन्। यसबाट उनले धेरै दुःख पाइन्। १७ वर्षकी भएपछि मात्रै उनले आफ्ना दुई योनी भएको थाहा पाएकी थिइन्। उनको महिनावारी असामान्यरुपमा लामो हुन्थ्यो। यसले गर्दा असैह्य पीडाबाट गुगज्रिनुपर्थ्यो। निक्कीले पटक-पटक […]
शिला शालिग्राम, एक प्रसिद्ध नाम । नामले नै यसको महत्व र पहिचान झल्काउने सामथ्र्य राख्न सक्दछ । भौतिक रूपमा हेर्दा यो एक ढुंगा मात्र हो, त्यो पनि विश्वकै ठूलो । तर, यो ढुंगो हेर्न प्रत्येक […]
काठमाडौँ : शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले […]
सामुदायिक मूल्य मान्यता पालना गर्नुपर्ने यो समाजमा ‘एकल व्यक्ति’ जहिले पनि जिज्ञासाको विषय बन्न पुग्छ। अनि एकल व्यक्तिलाई यो समाजले हेर्ने दृश्टिकोण पनि फरक हुन्छ! एकातर्फ इन्टरनेटभरी नै एक्लै हुनेहरूले गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ […]
यसकारण बढी उमेरका महिला बढी रुचाउँछन् पुरुष
आफूभन्दा विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, पुरुषमा आफूभन्दा बढी उमेरका महिलाप्रति विचित्रको आकर्षण देखिने गरेको छ। एउटा ताजा शोधका अनुसार पुरुष आफूभन्दा बढी उमेरका महिलाहरुसँग यौन सम्बन्ध कायम गरेपछि बढी मानसिक […]